‘डार्लिङ अब चै दुख नदेउ है’ | PaniPhoto
पानीफोटो / August 7, 2010 / No Comments
यो के को टेन्सन लिएको होला मैले । कस्तो साइनो उसको र मेरो ? अचम्म लाग्छ, मैले आजसम्म उनको अनुहार देखेको छैन तरपनि उनको एसएमएसले मेरो मनमा एउटा तरङ्ग ल्याउँछ । कस्तो होला उनको अनुहार ? देख्न पाए के मात्र गर्ने थिएँ ।
Tags: अब, चै, डार्लिङ, दुख, नदेउ, है / Posted in: हास्यव्यंग्य - रमाइलो